Myanmar political change brings food revolution - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Aug 18 2017 02:36 AM
Posted 18 August 2017 - 02:36 AM
It’sarich fishy broth that makes forasignature Myanmar breakfast when sprinkled with condiments ranging from coriander to crispy fritters.
And one young returnee restaurateur sees mohinga asapassport to reintroduce the country also known as Burma to the world, nowahalf-century of dictatorship has yielded to civilian led-government — andabuzzing food scene.
ငါးတွေအများကြီးပါတဲ့ ဟင်းရည်တမျိုးဖြစ်ပြီး ထပ်ထည့်လို့ရတဲ့အမယ်တွေအဖြစ် နံနံပင်ကနေ အကြော်မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ အရာလေးကတော့ မြန်မာတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ၀ိသေသပါ။
နိုင်ငံခြားပြန် စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် တယောက်ကတော့ မုန့်ဟင်းခါးကို မြန်မာ ပတ်စ်ပို့ လို့တင်စားပါတယ်။
Also tagged with one or more of these keywords: mohinga, Myanmar